I-Vonu Hut-Ekufuphi neBeachfront-yaBucala-Uhlahlo-lwabiwo mali oluNtofontofo
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguGene
UGene unezimvo eziyi-53 zezinye iindawo.
I-Sigasiga Sands kuphela kwepropati ephambi konxweme lwesanti emhlophe kuwo onke amaza. Ekuphela kwayo yiCousteau Resort erentisa malunga ne-US$1500 phezulu.
I-Sigasiga ine-ambience epholileyo yokuphumla kunye nokuzola. I-snorkeling kunye namachibi okuqubha ngaphambili. Iindlela zendalo ezidlula kwindawo yethu yokuGcina iHlathi elinemifula yenye iparadesi onokuthi ube nayo.
Ininzi indawo evulekileyo kunye nemfihlo. Umyili onikwe bonke ubutofotofo bekhaya kubandakanya nekhitshi eligcweleyo eline-gourmet. Abasebenzi bahlala kufutshane
Zonke iiholide zeSigaSiga Sands amakhaya aqeshwayo ngeeholide anikwe umyili, alayishwe ngezinto eziluncedo, acoceke kakhulu kwaye anikezelwa ngamaxabiso ohlahlo lwabiwo-mali! Awuyi kufumana enye ihotele enikezela ngendawo yokuhlala etofotofo, ixhotyiswe kakuhle, kwaye ilayishwe ngezinto ezininzi eziluncedo naphi na kufutshane neli xabiso okanye ngalo naliphi na ixabiso! Konke kunxweme oluhle lwesanti emhlophe abantu abaninzi balapha bakholelwa ukuba lolona lwandle lubalaseleyo, olufikeleleka lula kwisanti emhlophe kuyo yonke indawo yaseSavusavu. Olu lwandle luyafumaneka ukuba luzonwabele imini yonke nobusuku kwaye AKUMAKI kumanzi aphezulu njengabanye abaninzi. Yonwabela ikhitshi le-gourmet eligcweleyo lokuzityisa. Kukho iindawo ezintathu zokuphumla eziselunxwemeni zentlabathi emhlophe (kuwo onke amaza) ezibandakanya ii-hammocks, ii-chaise lounger, iimpompo zamanzi amnandi asentwasahlobo, ishawari yangaphandle kunye negumbi lokuthuthuzela. Iimpepho ezingaguqukiyo zaselwandle zixatyiswa kakhulu apha xa kuthelekiswa nezinye iipropathi ezikufutshane nedolophu. Abasebenzi bethu abanobubele bahlala kufutshane kwaye banokujonga zonke iimfuno zakho. Abantwana bahlala bamkelekile!
I-Intanethi ye-WiFi engenamkhawulo kuyo yonke ipropathi kunye nolwandle.
Amakhulu amathathu eemitha / iwaka leenyawo zesanti emhlophe engaselunxwemeni 24/7.
Akukho ndlela okanye miqobo phakathi kwakho nolwandle. (zilumkele ezinye iirenti zeSavusavu "oceanfront" ezingakuxeleli ukuba kukho indlela phakathi kwazo namanzi).
Qhuba uye kwindlwana yakho uze upake kwingca eluhlaza echetyiweyo.
UThutho oluLula ngeteksi ezifikelelekayo, iibhasi, kunye neemoto ezirentwayo
Iinqanawa ezi-3 ezinenkonzo yesikhitshane kunye nezikhululo zeenqwelomoya ezi-2 (i-SVU & LBS).
I-Panoramic Ocean Views kuyo yonke ipropati yeSigaSiga kunye nayo yonke i-4 bures.
Inkonzo yeGumbi enencasa, esanda kuphekwa-uku-odola iSigaSiga Indo-Fijian Cuisine (imenyu yepdf iyafumaneka. izidlo ezongezelelweyo).
Ichibi lokuqubha elinomgangatho wesanti 5 min hamba phantsi elunxwemeni nanini na.
Kuphela yimizuzu eyi-10 ukuya eSavusavu (SVU) kwisikhululo seenqwelomoya (ukuqhuba umda wesantya :-)) kunye neminye imizuzu emi-5 ukuya eSavusavu edolophini. (ezinye iirenti ziyabaxa ukusondela kwazo edolophini. Akunyanzelekanga ukuba senze njalo).
Iiglasi (ubhiya, iwayini, ijusi, iikomityi zekofu), izicwangciso zeSilverware kwiindwendwe ezi-4.
I-Coffee Press, i-Oven yeToaster, Iketile yamanzi ashushu, isitovu segesi esi-2.
Itafile yokutyela kunye netafile engaphandle yomthi oqinileyo ehlala iindwendwe ezi-4 nganye.
IFan enkulu yeCeiling kwigumbi ngalinye.
I-Intanethi ye-WiFi yasimahla (ixhomekeke kwi-w/10 mbps avg spd).
I-picnic gear inc ice chest kunye ne towels ezinkulu ezimibalabala zaselwandle kunye nokunye.
Ifenitshala ekhululekile kunye nobugcisa bodonga.
Amanzi ashushu kuzo zonke iimpompo zasekhitshini nakwigumbi lokuhlambela.
Iifeni ezinkulu zesilingi kuwo onke amagumbi ama-3.
I-BBQ gas Grill ekwabelwana ngayo phakathi kweeyunithi. Gcina kwangaphambili.
Ukhuseleko lwehotele, iikhoyili zeMosquito kunye nesigxothi.
Ishawa yangaphandle kunye nesitya sokuhlambela.
IDesika enkulu egqunywe yiOcean View kunye netafile yomthi oqinileyo kunye nezitulo.
I-shampoo, i-Body Gel, isitya kunye nesepha yesandla kwiimpompo zokuhambisa amanzi zinikezelwe.
Ukufikelela ngokulula kumnyango wendlu yakho (izinyuko ezi-2 ezincinci ukuya emnyango).
Kakade ke, iFiji idume ngokuba nobuhlobo obukhethekileyo kwabantu bayo. Ngaphandle kokucinga ngezinto eziphathekayo zehlabathi "eliphuhlisiwe", abantu balapha bonwabile kwaye banelisekile ngaphaya kokucinga kwakho! Ukonwaba, ukunceda nokwazi abanye, ukunyamekela intsapho kunye nabahlobo - yiloo nto elawula iingqondo neentliziyo zamaFiji. Abaninzi Abakhokela Ukuhamba baqhayisa ngokuba abantu baseFiji baphakathi kwabona bantu banobuhlobo emhlabeni. Sivuma ngentliziyo epheleleyo!
4.11 ·Izimvo eziyi-9
Kuninzi okanye kuncinci njengoko ukhetha. UMlawuli uhlala kwisiza phantse unyaka kwaye ufumaneka lula. Wamkelekile ukuba umndwendwele nangaliphi na ixesha kwindlu yakhe ekufutshane. Kananjalo sinabasebenzi abangabahlali (njengosapho ukusukela ngo-1992) abahlala kumgama omalunga neemitha ezingama-300. Silapha ukuze sikuncede nanini na. Ukanti, akunakufane wazi ukuba silapha ngaphandle kokuba usitsalele umnxeba. (ngaphandle kwemihlaba yesiqhelo kunye nokugcinwa kwendlu.)